Wafdi ka socda Guddiga Madaxbannaan ee Doorashooyinka Qaranka oo booqasho hawleed ku jooga Dowlad Goboleedka Juba-land – GMDQ
Wafdi ka socda Guddiga Madaxbannaan ee Doorashooyinka Qaranka oo booqasho hawleed ku jooga Dowlad Goboleedka Juba-land
Guddiga Madaxbannaan Doorashooyinka Qaranka ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 24-12-2017 soo gaarey magaalada Kismaayo ee dowlad Goboleedka Jubaland, Guddiga ayaa waxaa garoonka ku soo dhaweeyey qaar ka mid ah madaxda Juba-land. Gudoomiyaha guddiga Marwo Halima Ismail ayaa warbaahinta uga warramay ujeeddada safarka ay ku yimaadeen Jubaland. Gudoomiyuhu Waxay sheegtay in ay u yimaadeen wadatashi afar maalmood ah oo ay la yeelan doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada, Madaxda Dawladda, dhalinyarada, xildhibaanada, haweenka , ganacsatada iyo culumaudiinka.
Ujeeddada kulamadan ayaa waxay salka ku hayaan heshiiskii ay gaareen madaxda qaranka Nov 5, 2017 oo guddiga loogu igmaday in uu dalka oo dhan ka qabto la tashi ballaaran oo ku saabsan sidii dalka oo dhan looga gudbin lahaa nidaamka ragaadiyay ee qabiilka 4.5, loona gaarsiin lahaa doorasho qof iyo cod sannadka 2020ka.
Gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegtey in wadatashiyadan ay qayb ka yihiin heshiiskii London ee dhexmaray beesha caalamka iyo dawladda Somalia oo uu Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi ku ballanqaaday in ay ka goan tahay Dowlada Soomaaliya in dalka laga qabto doorasho cod iyo qof sanadka 2020ka.
Dhinaca kale wasiir ku xigeenka wasaarada arrimaha gudaha ee dowlad Goboleedka Jubaland ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin imaatinka madaxda Guddiga, ayna la shaqeyn doonaan maalmaha ay ku sugan yihiin deegaamada dawlad goboleedka J/land.
Guddiga ayaa aad uga mahad celiyay soo dhawaynta madaxda dawlad goboleedka J/land iyo sida ay uga go’an tahay in ay ka qayb qaataan geedi socodka hirgelinta doorashada dalka.
Waxaa la faafiyey December 25, 2017 August 16, 2018